अष्ट्रेलियामा अलपत्र बिद्यार्थीको भविष्य थप अन्यौलमा, कन्सल्टेन्सीमाथि कारवाही नहुने छनक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यार्थीले सरकारी समितिमा कुनै उजुरी नदिएकाले कन्सल्टेन्सीलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ। अष्ट्रेलियास्थित एआइबिटी कलेजमा नर्सिङ विषय अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम सत्र पुरा हुनु अगावै अष्ट्रेलियन सरकारले सो कलेज बन्द गराएको कारण नेपाली बिद्यार्थी अलपत्र परेका थिए।
कलेज बन्द भएपछि अलपत्र विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्न माग गर्दैै संचारमाध्यम समेत गुहारेका थिए। मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले पिडीत विद्यार्थी र आफन्तलाई उजुरी दिन आब्हान गरेको थियो। तर कुनै पनि विद्यार्थीले उजुरी नदिएको कारण कस्लाई के कारवाही गर्ने भन्ने विषय खुलेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव देवकुमारी गुरागार्इँको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। एउटा मात्रै प्रतिवेदन भएकोले मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुस भन्दै सचिवलाई उपलब्ध गराएको कारण सो प्रतिवेदनको विषयमा मन्त्रालयका कुनैपनि अधिकारीलाई जानकारी छैन।
समितिले इक्यान, आइरिन, फेकन र नायर संस्थाका अध्यक्षसंग पिडित विद्यार्थीको तथ्याङ माग गरेको थियो। कन्सल्टेन्सीले ७ सय ४३ विद्यार्थी अलपत्र परेको उल्लेख गरेतापनि २ सय ४४ जनाको मात्र नाम उपलब्ध गराएका थिए।
प्रचार गरिए भन्दापिडित विद्यार्थीको संख्या कम भएपछि समिति आफै अलमल्ल परेको छ । एआइबिटीले नेपालमा आफ्ना ४ सय ६० एजेन्ट रहेको उल्लेख गरेपनि ७५ जनाले मात्रै विद्यार्थी पठाएको उल्लेख छ। कलेजको वेवसाइटमा भन्दा पनि कम कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाएको विषयमा मन्त्रालयले पुन छानविन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिवेदन फितलो देखिएपछि मन्त्री पोखरेलले पुन अनुसान्धान गर्न सचिवलाई आग्रह गर्नुभएको स्रोतले बताएको छ । तपाइहरुको प्रतिवेदनले ठोस निर्णय दिएन , पुन छानविन प्रकृया अघि बढाउनुस–मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– फितलो देखिएको प्रतिवेदनको विषयमा पुन अध्ययन हुनेछ। समितिले एआइबिटी कलेजमा पठाउने कन्सल्टेन्सीका अधिकारीसंग समेत सोधपुछ गरेको थियो।
परामर्शदाता संस्थाले १ सय ५३ कन्सल्टेन्सी मार्फत एआइबिटीमा विद्यार्थी पठाएको उल्लेख गरेका थिए तर मन्त्रालयमा ७५ कन्सल्टेन्सीले मात्र विद्यार्थी पठाएको तथ्य प्राप्त भएको छ।
मन्त्रालयले दर्ता प्रकृयामा रहेका अन्य कन्सल्टेन्सीले कानुन विपरित एआइबीटीमा विद्यार्थी पठाएको आशंका गरिएको छ। मन्त्रालयले ठोस निश्कर्ष नआएसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भएको छ।
तथ्याङक अनुसार एआइबिटीमा नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न बिसं २०७३ सालमा ४, २०७४मा २८ र २०७५ सालमा १ सय ४३ जना विद्यार्थी गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त संख्या नै गलत भएको हुनसक्ने मन्त्रालयको आंकलन छ।
अनुसन्धानको क्रममा मन्त्रालयले अष्ट्रेलियन दुतावाससंग सल्लाह लिएको थियो । दुतावासका अधिकारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने पहल गर्ने जनाएको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो देशको कलेज र त्यहाको प्रकृया र सिष्टमको बारेमा अध्ययननै नगरी विद्यार्थीलाई भीसा दिनु अष्ट्रेलियन सरकारको गल्ती भएको बताए। उनले भने–नेपालमै भएका सामान्य विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृतिनै गलत भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने– अब सरकारले विशेष र नेपालमा नभएका विषयमा मात्र अध्ययन गर्न जाने व्यवस्था मिलाउने तयारी गर्न लागेको बताए।
उहाले समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्र थप जानकारी दिने बताए। उहाले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयमा मन्त्रालयले गहन अध्ययन गर्ने र आवश्यक रहेमा पुन छानविन गरिने जानकारी दिए।
फेकनका अध्यक्ष कटवालले संचारमाध्यममा आएजस्तो गरी विद्यार्थी विच धेरै सममस्या नभएको बताए। इक्यानका पुर्व अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले मन्त्रालयले छानविन गरिरहेको अवस्थामा अहिलेनै कति विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन नसकिने दावी गरे।
उनले भने–विभिन्न कन्सल्टेन्सी मार्फत विद्यार्थी पुगेका छन्, कस्ले कति पठाएका छन् भन्ने तत्काल संख्या निकाल्न नसकिने उल्लेख गरे। नेपाल समाचारपत्र दैनिक